ဆရာဝန်က နောက် ၃ လ နေ ပြန်ပြပါဆိုရင်……. ( ၀ီလီဆာတန် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆရာဝန်က နောက် ၃ လ နေ ပြန်ပြပါဆိုရင်……. ( ၀ီလီဆာတန် )
ဆရာဝန်က နောက် ၃ လ နေ ပြန်ပြပါဆိုရင်……. ( ၀ီလီဆာတန် )
Posted by fatty on Jun 29, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 15 comments
MG မှာက ဆရာပဂေး ပညာရှိကြီးများကလဲပေါ … ဘုတ်အုတ်ကိုင် ဆရာကြီးများကလည်းမနည်း ဆိုတော့
တချို့ကတော့ သိတာလေးမျှဝေလိုက်ပါတယ် ဆိုပြီးသုံးကြတယ်။ ကျနော်တော့အဲလိုလဲမသုံးရဲဘူး
သိတာလေးမျှဝေ လိုက်ပါတယ်ဆိုကာမှ မင်းမျှဝေတာက သိပြီးသားကြီးပါကွာ … ဆိုရင် အခက်။
ရွာသားတွေကို ကွမ်းယာဆိုင်က စပ်ဆေးမသောက်ကြပါနဲ့ ဆရာဝန်ပြကြပါ။ ဆေးတွေကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် မသောက်ကြပါနဲ့
( တချို့က ရောဂါတခုဖြစ်လို့ ဆရာဝန်သွားပြတယ် သက်သာသွားတယ် … နောက်အဲဒါမျိုးထပ်ဖြစ်ရင် ဆရာဝန်ဆီမသွားတော့ဘူး
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အရင်က ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးဘဲ ဆော်ထဲ့လိုက်တာဘဲ )အဲဒီလိုတွေမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောရင် …..
ရွာသားပညာရှိတွေရီကြလိမ့်မယ် …။သိပြီးသားတွေ …။ ဒါလေးများဆိုပြီး …။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြတဲ့အခါ ဆရာဝန်က ၃လ နေပြန်ပြဖို့ချိန်းတတ်ပါတယ် …. ကျနော်အပါအ၀င် တချို့လူတွေ အထင်မှားတတ်ကြပါတယ်။
မလိုပါဘူးကွာပေါ့ ..။ မသွားဖြစ်ကြပါဘူး … အဲဒါနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကျနော်ပြောပြချင်တာပါ ..။ အမှန်က ဒီထဲက ဒေါက်တာတယောက်ယောက်ရေးဖို့ကောင်းတာပါ ..။
ကျနော်တို့က little knowledge- person တွေပါ။ ကိုယ်သိသမျှရေးလိုက်ပေမဲ့ကိုယ့် feel မဟုတ်ရင် မှားသွားတော့မကောင်းဘူးလေ ..။
ဒါကြောင့် ဒီပိုစ်ကို ဒေါက်တာ တဦးဦးများဖတ်မိရင် ပြင်သင့်ရင်ပြင်ပေးပါလို့ကြိုပြောပါရစေ။
ဒီလိုပါ …။ေ၇ာဂါကြီးတွေ သွေးတိုးတို့ ဆီးချို နှလုံး အစရှိတာတွေဆိုရင် ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ပြကြပါတယ်။ ပြလေ့ရှိကြတယ်ပေါ့။
လူနာသစ်ဆိုရင် ဆရာကြီးတွေက စမ်းသပ်မယ် .. ဆေးပေးမယ် … ၃ လလောက်နေပြန်ပြဖို့ စာအုပ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ရေးပေးလိုက်မယ်။
ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့လူနာဆိုရင် တပါတ်လောက်နေပြန်ပြဖို့ပြောလိမ့်မယ် …။ အဲဒါလူနာတွေက စိတ်မရှည်ကြဘူးဖြစ်နေတတ်လို့ပါ ..။
ဆရာပေးလိုက်တဲ့ဆေးနဲ့ သက်သာလာပြီဆိုရင် ၃ လပြန်ချိန်းရင် မသွားဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်သွားပြမယ် ဆရာက အဲဒီဆေးဘဲဆက်သောက်ပါ
နောက် ၃ လနေရင်ပြန်ပြပါ ဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့ ဆရာဝန် ဘော်ချက်ပြီထင်တတ်ကြပါတယ်။
အမှန်ကအဲလိုမဟုတ်ပါဘူး ကျနော်လတ်တလောကိုယ်တွေ့လေးမို့ .. တင်ပြရတာပါ။
အမျိုးသမီးမှာ သွေးတိုးရှိပါတယ် ..။ သွေးကျဆေး ၀ီလီဆာတန် ပေးလိုက်တယ် ( စာလုံးပေါင်းတော့မမှတ်မိတော့ဘူး )။
အမျိုးသမီးက အဲဒီဆေးနဲ့ သက်သာနေတယ် … ပြန်မပြဖြစ်တော့ဘူး။ ၃ လ နေပြန်ပြဖို့ချိန်းတာလေ။
တခါတလေ သွေးကျဆေးသောက်နေတဲ့ကြားက stress များပြီး သွေးတိုးလာပြန်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင် မိသားစုဆရာဝန်လိုဖြစ်နေတဲ့
နီးနီးနားနားဆရာဝန်ဆီ သွားပြီးသွေးတိုင်း သူပေးတဲ့ဆေး ထပ်သောက် လိုက်တာပါဘဲ။ အဲဒီဆရာဝန်ကိုတော့ပြောပြထားရတာပေါ့
ဘယ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြနေတယ်။ သူပေးတဲ့ဆေးသောက်နေပါတယ်ပေါ့ ..။
အဲဒီအခါများသောအားဖြင့် မိသားစုဆရာဝန်က ဆရာဝန်ကြီးပေးတဲ့သွေးကျဆေးကို မဝေဖန်ပါဘူး သွေးကျဆေးလဲ ထပ်မပေးပါဘူး။
တခြားနည်းနဲ့ ထိမ်းပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ..။ တခါတော့အဲလိုသွားပြရာကနေ မိသားစုဆရာဝန်က အဲဒီဆရာဝန်ကြီးဆီကို ဘယ်တုန်းက
နောက်ဆုံးပြထားလဲမေးပါတော့တယ် ။ ပြန်စစ်ကြည့်တော့ ပြန်ပြရမဲ့ရက်ထက် ၆ လလောက်ကျော်နေပြီ မပြဖြစ်ဘူးလေ။
အထူးကုဆီပြရတာက booking ယူရခက်တယ် .. သွားပြီးစောင့်နေရတာကလည်း တခါတလေ ည ၁ နာရီလောက်မှပြန်ရတယ်။
မိသားစုဆရာဝန်က ဒီတခါတော့ပြောတယ် ၃ လနေပြန်ပြဖို့ချိန်းရင် ပြန်ပြပါတဲ့ … အခုလက်ရှိသူပေးထားတဲ့ သွေးကျဆေးကို ပြန်ပြောင်းပေးနေပြီတဲ့။
ဘာကြောင့်များလဲဒေါက်တာဆိုတော့ … အဲဒီသွေးကျဆေးဟာ အဆုပ်ကို ထိစေတယ်တဲ့ ပြောရရင် ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆေးကုမ္ပဏီကလဲပြန်သိမ်းနေပြီတဲ့။ ဗုဒ္ဓေါ ………..။
……… တိုယိုတာကားကုမ္ပဏီက သူ့ကားတွေ ဘရိတ်စစ်စတန်ချို့ယွင်းလို့ပြန်သိမ်းသလိုပေါ့ …..။
အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ကိုယ့်မိဘ ဆွေမျိုး ထဲကသော်လည်းကောင်း မိတ်ဆွေများထဲကသော်လည်းကောင်း
အဲဒီသွေးကျဆေးများသောက်နေရင် ဆရာဝန်ဆီကိုပြန်ပြကြပါလို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား ………………….။
ဒေါက်တာများ စာလုံးပေါင်းလေး ဖေါ်ပြပေးကြပါလား …။ မသိဘဲဆက်သောက်နေကြမှာစိုးလို့ပါ။
မှတ်ထားမယ်နော် ၀ီလီဆာတန်………. ၀ီလီဆာတန်……………… ၀ီလီဆာတန်……
စာလုံးပေါင်းတော့ ဒေါက်တာအီတုန်း.ဆိုလား ဘာလား ရှိတယ်ဆို
အရင်က ရွာဆရာဝန် ” ဒေါက်တာ အောင်ကျော်ဦး” ဆိုတာလဲ ရှိတယ်လေ..
ကျနော်ကတော့ မြှည်ဝိုင်အိုင်တီ=မျှစ် ပဲပေါင်းတတ်တယ်
ရော် … ခက်ပြန်ပြီ
ရှုံးနိမ့်သူရေးတဲ့ ရာဇ၀င်ထဲမှာကတည်းက မှားရေးထားတာ အခုထိ ပေါက်ဖော်ကြီးလားမှားနေတုန်းပဲလား ။ အဲ့ဒီတုန်းကတည်းက ရေးပါတယ် …ဒေါက်ဆိုလို့ MBBS တို့ PhDတို့ မှီတဲ့ အဆင့်မဟုတ်လို့ ဒေါက်ဖိနပ်ပဲစီးတဲ့ etone ပါဆိုမှ … ဟွန့်
ရွာထဲမှာ တခြားဆေးပညာလောက လူတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ် …ဒေါ်မိုးသီတာစိုးတို့ … ၊ အန်တီပဒုမ္မာတို့ ၊ Endless တို့တွေလည်း ၀င်ရေးပေးကြပါဦး ..
အဒေါ်ကြီး etone က ဒေါက်တာလား ဘာလား မသိဘူး။ ဒေါက်ဖိနပ်စီးသွားရင်တော့ ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက် ဂွပ်ဂွပ်ဂွပ် မြည်တာတော့သိတယ်။ အပေါ်က မျက်စိလေး ကလယ်ကလယ် ဖြစ်နေတာ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဟင် etone ???
ဖြစ်ချင်တော့ တရက်ခေါင်းမူးတာနဲ့ သွေးတိုးတာပဲဆိုပြီး သောက်နေကျ သွေးကျဆေးပဲသောက်လိုက်ရော..
အဲဒါသူက သူထင်သလိုသွေးတက်တာမဟုတ်ဘူး၊ သွေးပေါင်ကျနေတာတဲ့
pressure zero ထိဖြစ်သွားတယ်၊ သေသွားရော
ဆေးတွေကိုလည်း သောက်နေကျပဲဆိုပြီး အရမ်းကာရောအသောက်မိဖို့ အရေးကြီးတယ်
ရွာထဲမှာ ဒီလိုတင်ပေးတာလည်း အများအကျိုးရေးပေးတာဆိုတော. ကောင်းပါတယ်။
ကိုဖက်တီး ရေးထားသလို တူတဲ့ အဖြစ်လေး တစ်ခု ရှိပါသေးတယ် ။ လူတော်တော်များများ ဟာ ဖျားတဲ့နာတဲ့ အခါ ဆေးခန်းသွားလေ့ရှိပါတယ် ။ ဆေးခန်းက တော့ လိုအပ်တာ ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး သောက်ရမယ့် ဆေးကို သူ့ အချိန်နဲ့ သူ ၊ ဘယ်နှစ်ရက် သောက်ရမယ် ဆိုပြီး ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အဲဒီဆေး ကို သောက်ရင်း အဖျားလေး များ သက်သာလာပြီ ဆိုရင် ဆေးခန်းက ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးကို ကုန်အောင် ဆက်မသောက်ကြပါဘူး ။ ညွှန်လိုက်တဲ့ အတိုင်း ဆေးပတ်လည် အောင် မသောက်ကြပါဘူး ။ အဲဒါတွေ က နောက်ပိုင်း ဘာဖြစ်လာသလဲ ဆိုရင် ဆေးယဉ်တယ် ဆိုတာ ကို ဦးတည် လာပါတယ် ။ နောက်တစ်ခါ ဖျားနာခဲ့လို့ယခင် ဖျားတုန်း က သောက်ခဲ့တဲ့ ဆေးကို သောက်တယ် ဆိုရင် ယခင် က ၃ လုံးသောက်လို့ သက်သာတယ် ဆိုရင် အဲ့ခါကြ ၃ လုံးနဲ့ လုံးဝ မသက်သာ တာမျိုး တွေ ရှိလာပါတယ် ။ တစ်ချို့ လူနာတွေ မှာဆိုရင် အဲဒီဆေး ပေးလို့ လုံးဝ မသက်သာစေတဲ့ အထိ ဆေးယဉ်ပါးမှု မျိုးတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ ရပါတယ် ။
လူတွေလည်း ခပ်ကြောင်ကြောင် ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ.. ဟိုဟာ လိုလို ဒီဟာလိုလိုနဲ့..
ကြားဖူးတာ တခုတော့ ရှိတယ်.. သွေးကျဆေး တမျိုးတည်းကို နှစ်ရှည်လများ စွဲ မသောက်သင့်ဘူး။ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာ ဆိုးကျိုးတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ် သူငယ်ချင်း အဖေတောင် ဘန်ကောက်သွားလိုက် ပြန်လိုက်နဲ့ တော်တော် ကုန်သွားတယ်။
နိုင်ငံခြားဆေးတွေဒါမျိုးဖြစ်တော့ သူကြီးဘာပြောမလဲ။ ဒါတွေကသုသေသနလုပ်ပြီး အောင်မြင်လို့ ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလား။ အချိန်မှီသိလို့တော်သေးရဲ့။
ဆရာဝန်မဟုတ်ပေမဲ့ ဝင်ပြောလိုက်အုံးမယ်။ ကျန်းမာရေးခြူချာတယ်ဆိုတာ ဓာတ်ကြီးလေးပါး မညီညွတ်လို့ဖြစ်တာ။ ဒါကြောင့် မနက်တိုင်း နေရောင်အောက်မှာ မြေကြီးပေါ်ရပ်ပြီး မီးစတဖက် ရေမှုတ်တဖက်နဲ့ ငါနေကောင်ပြီးလို့ ၃ခါရွတ်။ တလကြာရင် သိသာလာလိမ့်မယ်။
အသက်ကြီးလာရင် လူ တော်တော်များများ သွေးတိုးရောဂါ ၀င်လာတတ်တယ် ဆိုတော့ … သွေးကျဆေး နဲ့ပတ်သတ်တာတွေက သိထားသင့်တာပေါ့ ….ဆရာဝန်တွေနဲ့သေချာ တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်သင့်တာပေါ့နော် ။
ဦးးဖက်၊ ကျွန်မက ဒီ field ဒီ profession ထဲက ခွာလာတာ နှစ်ကြာတော့ သံချေးတက်နေပြီ။
ဦးဖက်ကိုဖြေချင်တော့ ဘုတ်အုပ်တွေလှန် နက်ထဲဝင်ကြည့် အလုပ်ရှုပ်သွားပြီ။မုန့်ကျွေးရမယ်နော်။
၀ီလီဆာတန်ဆိုတာတော့ မသိဘူး၊ဆေးနာမည်တွေက Brand အမျိုးမျိုး လာတာလေ။လိုက်မမီဘူး။
generic name ဖတ်ကြည့်ပါအုံး။ သိသလောက်တော့ ဆာတန်ပါတဲ့ဆေးတွေက
Angiotensin2receptor blocker လို့ခေါ်တယ်။
ဒီမှာတော့ Losartan ,Candesartan အသုံးများတယ်။
Losartan က Losacar,Losartas,Prosan,Repace,Covance နာမည်တွေနဲ့ အသုံးများတယ်။
Candesartan က Candelong,Cantar နာမည်တွေနဲ့ ၀င်တယ်။
သိသလောက်တော့ ဒီအုပ်စုက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းလို့ နောက်ပိုင်းအသုံးများတယ်။နည်းနည်းပျော့လို့ ဆီးဆေး Hydrochlorthiazide နဲ့ တွဲပေးကြတယ်။US မှာလည်း ဒါဘဲ ပေးတာများတယ်တဲ့၊
အဆုပ်ထိခိုက်တယ်ဆိုတာတော့ မကြားမိသေးပါ။သူက Postural Hypotension ခေါ်တဲ့ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ရင် မူးမေ့သွားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သွေးပေါင်ကျဆေးထဲမှာ ချောင်းခြောက်ဆိုးတတ်တာတော့ Coversyl (Plus) ဆိုတာပါ ။သူက ACE inhibitor ဆိုတဲ့ အုပ်စုထဲပါပါတယ်။
ဒီ ၂ခု မတူပါ။ အပန်းမကြီးရင် ဆရာဝန်တော့ ချိန်းတဲ့ရက်အတိုင်းသွားပြတာ ကောင်းပါတယ်လို့ အကြံပေးပါရစေ။
သွေတိုးရောဂါအတွက် အလွယ်ဆုံးကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ၆မွှာခန့် ဓါးပြားရိုက် ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်ခန့် လေသလပ်ခံပြီး မှထမင်း နှင့် စားပါ။(ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင် ပြောသွားတာလို့ထင်ပါတယ်။)
padonmar ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်ဒီပိုစ်တင်တာက အဲဒီဆေးကို မသိဘဲ ဆက်သောက်နေကြရင် ဒုက္ခများမှာစိုးလို့ပါ။
ဆေးနာမည် ကို ကျနော်ရှာ ကြည့်ပါ့မယ်။ အဲလို အဖက် ဖြစ်တယ် မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့
ကျနော် တို့နားမလည်ပါဘူး ။ ဆေး အွန်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကဘဲပြောပြတာပါ။ အဲဒီဆရာကြီးကဘဲ
ပြောင်းပြီး အွန်ပေးပါတယ်။ အမည် စာလုံးပေါင်းရရင် ကျနော် ထပ်ရေးပေးပါ့မယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက်က ဆေးခန်းတွေ ဆေးရုံတွေသွားရတာပါပဲ ရှောင်လွဲလီု့မရပါဘူး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးကို သေချာသောက်သုံးဖို့တော့လိုတာပေါ့. ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လျှောက်သောက်ရင် ဒုက္ခဖြစ်မှ ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်တော့ဘူး ဆင်ခြင်တုံတရားလေးထားပြီး ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ကြပါ.. သွေးတိုး ဆီးချို တွေက လူလတ်ပိုင်းတွေ အဖြစ်များတော့ ရွာသူ ရွာသားတွေ အားလုံး ဂရုစိုက်ကြပါလို့….
Willisartan .. 20/40 ဖြစ်ပါတယ် ..။